Yakatemerwa Liability Company (LLC) Ruzivo
Kambani ine chikwereti chakashomeka, kana LLC isangano bhizinesi chimiro rinotendera mamwe marapirwo akanaka emitero, pamwe nekuchengetedzwa kwemutoro wega, kune "nhengo" dzinobatanidzwa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo chaiyo mamiriro uye chinzvimbo chinogona kusiyanisa kubva kudunhu kuenda kuhurumende saka kunyatso tarisisa kumitemo yenyika iyo iyo LLC ichaumbwa ichave yakakosha.
Iyo LLC sebhizimusi dhizaini modhi inobvumidza kune vakawanda varidzi, kana "Nhengo," uye "Inotungamira Nhengo," kunakidzwa kushomeka mutoro. Nhengo Inotungamira inowanzo kuve mukuru musoro wesangano uye rinotarisira manejimendi. Iyo purofiti kana kurasikirwa kwesangano rebhizinesi rinopfuura nekunanga kunhengo yemunhu mari yemutero yekudzoka (IRS Fomu 1040). Iyo LLC inonyorera Fomu 1065, uye inonyora nhengo yega yega inobhadharwa mutero pa IRS Fomu K-1. Iyo mambure purofiti yeiyo LLC haifungidzirwe semari inotambirwa neMitezo (kunyangwe ichigona kuve yeManaging Nhengo seyakakosha "fringe kubatsirwa" kurapwa - ona pazasi), uye nekudaro haisi pasi pebasa rekuzvishandira.
Zvakanakira iyo LLC
Iyo LLC inobvumidza isingagumi nhamba yeMitezo; zvisinei, kana iyo LLC iine muridzi mumwechete (Nhengo), ichabhadharwa semutero wega.
Iyo LLC inobvumidza iyo "yakasarudzika mugove" wemubhadharo – iko kusingaenzaniswi kupatsanurwa kweMitezo purofiti uye kurasikirwa (muzvikamu zvakasiyana kubva kune yavo yega zvikamu zvevaridzi). Izvi zvinoreva kuti Nhengo dzinogona kunakidzwa nezvakanaka zvekugamuchira purofiti (uye kunyora kurasikirwa) pamusoro pehuwandu hwevaridzi.
Nhengo dzinonakidzwa neMutoro Wakatemerwa, zvinoreva kuti ivo vanochengetedzwa pachezvadzo kubva kune chero chisungo cheiyo LLC uye nemitongo yakabudirira, pamwe neiyo iyo LLC pachezvayo.
Kugadzirisa chikamu cheMitezo chemubhadharo wemari kunoonekwa semari yawanikwa nekuti Mamaneja Anotorwa anoonekwa semuridzi anoshinga- saka achizadzisa Mutariri weNhengo kurapwa kwakakosha.
Chikamu cheMitezo chezasi-mutsetse ("net") purofiti yeiyo LLC haina kutarisirwa semari inowanikwa, uye nekudaro haisi pasi pemutero wekuzvishandira.
Nhengo dzinobhadharwa vachishandisa chero kugoverwa kwemubhadharo kana vimbiso dzakabhadharwa. Kugovaniswa kwemubhadharo kunotendera nhengo yega yega kuzvibhadharira nekungonyora cheki – pese pavanenge vachida mari (chero bhizinesi riine mari iripo). Mari dzinovimbiswa dzinomiririra mari inowanikwa kumitezo, nokudaro ichivakwanirisa kunakirwa nezvakanakira mutero unofarirwa nemutero.
Nhengo Inotungamira yeA LLC inogona kutora 100% yemari yeinishuwarenzi yehutano yaanobhadhara, kusvika padanho rero pro-rata mugove weiyo LLC mambure purofiti, nekuti iyo purofiti inoonekwa seinowanikwa mari. Ongorora: Kana nhengo yawana mari, ichave inokodzera.
Sangano rinogona kuve nhengo yeI LLC. Izvi zvinokutendera kuti iwe ugadzire imwe nhanho yeuridzi, iyo yakagadzirirwa kugadzira chinzvimbo chinogona kupa yakadai yechinyakare "fringe mabhenefiti" sehurongwa hwekurega basa uye imwezve nhanho yekudzivirira kubva pachikwereti.
SeNhengo, unogona kupa mari kana zvimwe zvinhu kune iyo LLC, kana kukweretesa iyo LLC mari yekuisa madhora kana kukosha mubhizinesi. Unogona kutora madhora kunze nekutora kudzoserwa kwechikwereti chako (pamwe nemubereko), kugoverwa kwemubhadharo kana mubhadharo wakavimbiswa. Kana chero nhengo dzikafa, iyo LLC inogona kuenderera mberi iripo- zvichienderana nevhoti imwe chete inovhoterwa nenhengo dzese dzasara.
Kukanganisa kweI LLC
Chikamu chega chega cheNhengo che-purofiti yemhindu inomiririra mutero wemari- kunyangwe chikamu chemubatsiro chenhengo chakapihwa iye kana kwete.
Mugove weManaging Member chikamu chepasi-mutsetse purofiti yeiyo LLC inoonekwa semari inowanikwa, uye nekudaro inoenderana nemutero wekuzvishandira.
Chikamu cheMitezo chemubhadharo wepasi-mutsara haufungidzirwe semari inotambirwa nekuti Nhengo dzinoonekwa sevaridzi vasina basa; Naizvozvo, Nhengo hadzikodzere kurapwa kwakasarudzika mutero.
Senhengo ye LLC, hautenderwe kuzvibhadharira mibairo.
Pamusoro pezvo, iyo LLC inogovera mabhenefiti mashoma pamusoro pemamwe mabhizimusi masisitimu- semuenzaniso, nepo Chitsauko "S" mubatanidzwa ungabvumidza kune dzakawanda zvakafanana zvidziviriro pamwe nenzvimbo dzekugovera nhumbi, ivo vanogumira kune makumi manomwe neshanu "vatengesi," uye hapana vachengeti ava vanogona kunge vari veMubatanidzwa kana maIRA (zvakapesana zvakanangana neiyo LLC iyo inobvumidza Masangano se "Nhengo") - nekudaro ichiganhurira sarudzo iyi kumasangano madiki kana kumanikidza kudzoserwa kana kutengwa kwemastockholders kumasangano aya anoda kutendeuka .
Izvo zvikonzero zvikuru zveiyo LLC Fomati kana Yakatemerwa Liability Kambani sangano ndeyekutongwa kwematare, kuvimbika, kuchengetedza mutero, kubvisirwa mushandi mabhenefiti, kuchengetedzwa kwemidziyo, kusazivikanwa, kurerukirwa kwekusimudza capital, kugadzira rakaparadzana rezvemitemo bazi rekuzvidzivirira, Kuumba iyo LLC ine yakafara huwandu hwesimba kupfuura iro rekupihwa wega, madiki madiki ematare mabhenefiti, mutoro wakasiyana wezvikwereti zvekambani, uye nguva isingaperi. Mushure meAdvis Fform kana LLC kubatanidzwa iwe unogadzira wakasiyana mutemo munhu. Iwe uri mugovani. Unogona kudzora mubatanidzwa. Nekudaro, kana rako bhizinesi rakamhan'arwa iwe unogona kudzivirirwa kubva kumhan'arwa pachako mushure mekugadzira iyo LLC kana LLC Fform.
Kudzikisira Umutoro Wemunhu
Paunenge uri Kugadzira iyo LLC kana LLC kusanganisa iwe unogadzira wakaparadzana munhu kubva kune iye kana ivo varidzi vayo. Naizvozvo, kana Uchigadzira iyo LLC kana yako LLC Incorporation yakamhan'arwa, pane zviripo mumutemo kuchengetedza varidzi (nhengo) nemaneja kubva pachikwereti chega. Paunenge iwe waita bhizimusi neruzhinji kana uine kana mushandi mumwe chete, iwe unenge wakasununguka kuvhurika kune zvemutemo chisungo. Gore negore kune zviuru zvedu zvinorasikirwa nechero zvese zvatiinazvo nekuda kwechikwereti pachedu nemabhizinesi edu asina kubatanidzwa. Uye zvakare, kamwechete mushure meMaficha E LLC zvakakosha kuti bhizinesi rako riteedzere zvimwe, zvakapusa, zvimiro kuitira kuti zvionekwe uye zviite sebato repamutemo rakaparadzaniswa. Mumwe anogona kuwedzera kudzivirirwa kwechisimba kunyangwe achienda ne dzakatevedzana LLC, inova imwe kambani ine rakazvimiririra chikwereti cubby-maburi.
Kugadzira iyo LLC Mutero Makomborero
Kune mamwe maripo emitero anowanikwa mushure meKugadzira iyo LLC pane kune mabhizinesi asiri ma LLC. Mimwe mienzaniso mishoma yemabhenefiti aunogona kuwana kana iwe ukaumba Yakatemerwa Dhizaina Kambani inosanganisira yekurapa mari, chirongwa chepenjeni, nzendo dzebhizinesi uye varaidzo. Zvinonzi boka rine zvikamu zvepamusoro zvemitero yakaongororwa ndiyo inosanganisa fomu reShedhiyo "C" rakamirirwa nevanozvishandira. Chiyero chekuongorora cheiyo LLC Corporation chakadzikira zvakanyanya kupfuura kune vanozvishandira. Iwe unogona kuve wako uye unoshandirwa neako LLC Incorporation panguva imwe chete, nekudaro, kubvisa iyo Chirongwa "C" yekuzvishandira kudzoka kubva kune yako runyorwa rwemafaira IRS magwaro emitero. Iyo IRS inoita kunge inopa yakasarudzika kurapwa mushure meKugadzira iyo LLC uye LLC Fform maererano nezve kubvisirwa mutero.
Inobviswa Yevashandi Kubatsirwa
Paunenge uri Kugadzira iyo LLC iwe unogona kupa kune yakawanda-yakawanda mutero unobvisirwa iwe nevashandi vako. Kunyangwe munhu-mumwe Achigadzira iyo LLC kana LLC inosanganisirwa inogona kunakidzwa zvikuru mutero-unobvisirwa mabhenefiti senge kubviswa kweinishuwarenzi yehutano, kubviswa kwekufamba, kubviswa kwemotokari, kuderedzwa kwevaraidzo, zvivaraidzo uye zvimwe zvakawanda. Imwe yemabhenefiti anonyanya kubatsira ndeye chirongwa chepenjeni kana 401K. Mari inoiswa muhurongwa hwepenjeni hwakarongeka inobvisirwa mutero uye mari yacho inokura isina mutero pamudyandigere. Aya mabhenefiti akasarudzika ega anogona kubhadhara Kuumba iyo LLC kana yako LLC Fform kakawanda pamusoro.
LLCs uye Asset Dziviriro
Mhosva inowanzo kubva kune imwe yenzira mbiri: bhizinesi kana wega. Kana bhizinesi rako rakamhan'arirwa - mumwe munhu achitsvedza nekudonha munzvimbo yako yebhizinesi, achipinda mutsaona yemotokari panguva dzekushanda, semuenzaniso - pane zviga mumutemo zvekuti chero Kuumba iyo LLC kana iyo LLC Corporation inogona kukudzivirira kubva kumhan'arwa pachedu. Nekudaro, kana iwe uchimhan'arirwa pachako - kupinda mutsaona yemotokari panguva dzisiri kushanda maawa uye kumhan'arirwa kweinopfuura yako inshuwarisi kufukidza, semuenzaniso, iyo Kuumba iyo LLC kana LLC Fform inogona kupa chengetedzo irinani. Iyo Kuumba iyo LLC ine nhengo. LLC inosanganisirwa ine vagovani. Mutemo wemubatanidzwa unobvumidza stock yako kutorwa mumatare edzimhosva. Mukupesana, pane zviripo mumutemo zvekuti kana iwe ukamhan'arirwa pachako, nhengo yako mune yako LLC inogona kudzivirirwa kubva pakubviswa kwauri. Ichi ndicho chimwe chikonzero nei iyo Kuumba iyo LLC yave ndiyo inonyanya kufarirwa sarudzo yekukwereta zvinhu senge real estate.
LLCs uye Kuzivikanwa
Kuva nenhumbi muzita rako pachako, senge bhizinesi, inzvimbo yekudyara kana mota, zvinopa tarisiro iri nyore kune iye anoita kutsvaga kweaseti. Usati watanga kumhan'ara, zvakajairika kuti gweta riite kutsvaga kweasset. Kana pasina zvinhu zvinogona kuwanikwa muzita rako izvi zvinogona kudzikisira mukana wekuti kumhan'ara kuteverwe. Kuisa midziyo muzita reiyo LLC Fomati uye Makambani Anotadza Kuita Zvikwereti zvinogona kupa jekete rekuvanzika pakati pako neavo vari kufunga zvekutongwa nemutemo. Kuvanzika uku kunowedzerwa kana mamaneja "akasarudzwa" akanyorwa. Iine Makambani Akapindirwa Anosarudzwa Ekusarudzika Service, iwe unochengeta wega uye kutonga kwekambani yako. Nekudaro, iwe unosarudza Makambani Anomiririrwa vamiririri (vasina masimba kana muridzi weako Kuumba iyo LLC) kuti inyorwe muzvinyorwa zveveruzhinji.
Iko kune hombe sosi yemari inowanikwa kune LLC Corporation uye LLC Fform pane kune kudyidzana kana proprietorship. Nekuti Kuumba iyo LLC kwakaparadzaniswa nevaridzi, vanhu vanowanzo kuve vanodisisa kuisa mari vasingatore chikwereti kana mutoro webhizinesi rekambani. Iyo Forbes 400 runyorwa rwevapfumi vekuAmerica vazere nevanhu vanobata yakanyanya chikamu muzana yehupfumi hwavo kuburikidza nehuya hwemakambani ivo kana nhengo dzemhuri dzavakatanga. Mazhinji mabhizimusi ega-ega kana ehukama mabhizimusi anotengeswa kamwe chete kana kaviri muhoro wepagore. Ipo, makambani mazhinji anokosheswa pakati pegumi nemaviri kusvika makumi maviri neshanu pamubhadharo wepagore kana zvimwe.
Yakaparadzaniswa Nhengo Yemutemo Nzvimbo
Nekuti iwe neyako LLC inosanganisirwa mapato maviri akapamutemo, kumhan'ara kunounzwa kukambani yako hakudi kukukanganisa iwe pachako. Kana yako Yakatemerwa Liability Kambani inokwereta mari, pane matanho senge iwe hausi iwe pachezvako unokwereta kubhadhara chikwereti. Kugadzira iyo LLC kunosara mushure mehupenyu hwemuridzi (s). Nekudaro, yega proprietorship inoguma kuvapo mushure mehupenyu hwomuridzi.
Rakafara Range reMasimba
Kugadzira iyo LLC kunogona kuita chero chiitiko chepamutemo, kusanganisira, asi hachingogumira kune zvinotevera:
Kugadzira iyo LLC ine simba rekubata, kutenga uye kuburitsa chaiyo chivakwa uye chako chivakwa uye kuita mogeji kana kukweretesa chero yakadaro chaiyo uye yega chivakwa nemvumo yayo. An LLC inosanganisa ine simba rekubata chaiyo uye wega pfuma mune chero nyika, ndima kana nyika.
Ane simba rekuita zvibvumirano.
Panogona kuve nekuenderera mberi, kunyangwe mushure mekufa kwemuridzi (s).
Iine simba rekukwereta mari pazvinenge zvichidiwa pakutengeserana kwebhizinesi rayo, kana kuitisa kodzero dzayo dzekambani, rombo rakanaka kana franchise, kana kune chero chimwe chinangwa chepamutemo chekuumbwa kwayo.
Kuumba iyo LLC uye LLC Fform inogona kuburitsa mabond, zvivimbiso, mabhiri ekuchinjana, madhiri, uye zvimwe zvisungo uye humbowo hwechikwereti, chinobhadharwa panguva yakatarwa kana nguva, kana chinobhadharwa pakuitika kwechiitiko chakatarwa kana zviitiko, zvingave zvakachengetedzwa mogeji, rubatso kana zvimwewo, kana kusachengetedzwa, kwemari yakweretwa, kana kubhadhara muripo wezvinhu zvakatengwa, kana zvakawanikwa, kana chero chimwe chinhu chepamutemo.
LLC Corporation uye LLC kusanganisa kune simba rekumhan'ara uye kumhan'arirwa mune chero dare remutemo kana kuenzana.
Ane simba rekumisikidza vakadaro maofficial nevamiriri zvinozodiwa nenyaya dzekambani, uye kuvabvumidza muripo wakakodzera.
Iine simba rekuita chibvumirano chekushanda chisingaenderane nebumbiro remitemo kana mitemo yeUnited States, kana yeHurumende iyo iyo LLC yakaumbwa, kune manejimendi, mutemo uye hurumende yezvinhu zvayo nepfuma, kuchinjisa stock yayo, kutengeserana kwebhizinesi rayo, uye kushevedzwa uye kuitiswa kwemisangano yeavo vanochengeta zvinhu.
Ine simba rekuzvimisikidza uye kuzvinyungudika, kana kukuvadzwa kana kuputswa.
Ane simba rekutora uye kushandisa kambani chisimbiso kana chitambi, uye kuchinja zvakafanana pakufara.
Ane simba rekusimbisa, kutenga, kubata, kutengesa, kupa, kuendesa, kuita chikwereti, rubatso kana zvimwe kurasa zvikamu zvehumwe, kana chero mabondi, kuchengetedzeka kana humbowo hwechikwereti chakagadzirwa neimwe kambani, varidzi veizvi zviyero, zvisungo, kuchengetedzeka kana humbowo hwechikwereti, kushandisa kodzero dzese, masimba uye mukana wekuva muridzi, kusanganisira kodzero yekuvhota, kana paine.
Iine simba rekutenga, kubata, kutengesa uye kuendesa zvikamu zvehukama hwayo, uye inoshandisa iro capital yayo, capital capital, surplus, kana imwe pfuma kana fund.
Iine simba rekuita bhizinesi, kuva neimwe kana mamwe mahofisi, uye kubata, kutenga, kutora imba uye kuratidza chaiyo uye wega pfuma mune chero akati wandei matunhu, matunhu, zvinhu uye kutsamira kweUnited States, Dunhu reColumbia, uye chero kunekunze. nyika sekubvumidzwa nemutemo.
Iine simba rekuita zvese uye zvese zvinodiwa uye zvakafanira kuzadzikiswa kwezvinhu zvakanyorwa mugwaro rayo kana zvinyorwa zvesangano, kana chero gadziridzo yazvo, kana zvakafanira kana zvine chekuita nekudzivirira uye kubatsirwa kweiyo LLC, uye, kazhinji, ramba uchiita chero bhizinesi repamutemo rinodiwa kana zvine chekuita nekuzadzikiswa kwezvinhu zveiyo LLC, ringave kana kwete bhizinesi rakadaro rakafanana nemasikirwo ezvinhu zvakatarwa mugwaro kana zvinyorwa zvesangano rekambani, kana chero gadziridzo yazvo.
Ane simba rekupa zvipo kuitira hupenyu hweveruzhinji kana yezvipo, zvesainzi kana zvinangwa zvekudzidzisa.
Iine simba rekupinda mukudyidzana, zvakajairwa kana zvakaganhurirwa, kana mubatanidzwa, zvine chekuita nechero zviitiko zviri pamutemo, sezvinobvumidzwa nemutemo.
Dare Rezvikwereti Diki
Yakatemerwa Liability Kambani inogona kutumira maneja, mukuru, director kana mushandi kuti amiririre kambani mumatare madiki ematare. Kusiyana neicho wega proprietorship, izvi zvinogona kusunungura iyo nguva yemuridzi yekuita bhizinesi ivo vashandi vachitarisira zvemutemo nyaya.
Yakaparadzaniswa Chikwereti cheZvemakambani Zvikwereti
Kugadzira iyo LLC uye LLC Fform yakaparadzaniswa nevaya vanayo. Kana iyo kambani ikarasikirwa nematare edzimhosva kana iine chikwereti isingakwanise kubhadhara, Kuumba iyo LLC kana iyo LLC Fomendi pachayo inobata. Iyo Yakatemerwa Liability Kambani inogona kupa yakasimba nhovo yekudzivirira yavo pachezvayo pfuma yenhengo uye mamaneja. Mukupesana, neicho wega proprietorship kana kudyidzana, varidzi vanogona kurasikirwa nehupfumi hwavo mune bhizinesi mhosva. Kana nhengo uye / kana mamaneja vakazvivimbisa pachavo zvikwereti zvemakambani, hongu, vanogona kupihwa mhosva. Uye zvakare, Kuumba iyo LLC kunofanirwa kusimbiswa uye kushanda nemazvo kuti nhoo yepamutemo igare iri munzvimbo. Zvekudzivirira zvakanyanya, zviri pamutemo kungwarira kubata iyo LLC Sangano seyakavanzika mutemo. Semuenzaniso, zvakakosha kubhadhara mari yekambani nemari yekambani (kana kuve shuwa kuti kambani inokurumidza kukubhadharira mari yebhizimusi kana iwe wakabhadhara ivo wega). Zvakare, waisazobhadhara yako yemagetsi bhiri nemari yekambani. Pane kudaro, iyo kambani inokubhadhara iwe muhoro kubva kukambani inoongorora account (inova mutero-kubvisirwa iyo kambani). Iwe unoisa cheki yako yemubhadharo kuakaundi yako yekutarisa uye shandisa mari idzodzo kubhadhara yako yemagetsi bhiri
Ndinoda nhengo mbiri here?
Nyika zhinji dzinobvumidza kugadzirwa kweane-nhengo-nhengo maAdv. Dzimwe nyika dzinoda nhengo mbiri kana dzinopfuura. Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti iyo IRS inogona kunyorera akasiyana mutero zvikwereti kune iyo LLC ine chete nhengo imwechete (yakabhadharwa sekambani kana isina kuremekedzwa mubato wemitero) pane zvazvinoita kune iyo LLC ine inopfuura imwe nhengo (yakabhadharwa semubatanidzwa nekutadza ).
Ini ndinofanira kubata LLC misangano?
Mumatunhu mazhinji, iyo LLC haidiwe kuti iite inyore nhengo / misangano yemaneja kuitira kuchengetedza chengetedzo yakapihwa pamutoro sezviri kudikanwa nevakuru / vatungamiriri uye vagovani vemakambani. Semuenzaniso, California haidi mitezo yenhengo / maneja kunze kwekunge izvo Zvinyorwa zveSangano zveSangano zvanyatsozvida
Ndiani anovhota mune LLC?
Muzviitiko zvakawanda, kodzero dzekuvhota dzinoenderana neperesenti yenhengo ("muridzi") kufarira. Nekudaro, izvo zvinyorwa zvesangano kana chibvumirano chekushanda zvinogona kumisikidza seti yakasarudzika yemhando yekodzero dzekuvhota
Ini ndinogona kutengesa Nhengo Kugovana?
Kazhinji, nhengo dzemitezo dzinogona kutengeswa chete pakubvumidzwa kwenhengo dzinobata ruzhinji mukufarira, kunze kwekunge zvataurwa neimwe zvinyorwa zvesangano kana chibvumirano chekushanda ..
Inguva yakareba sei iyo LLC inotsungirira?
Nyika zhinji ikozvino dzinobvumidza iyo LLC kuve nehupenyu husingaperi. Munguva yakapfuura LLC's yaifanirwa kupa zuva iro kuvapo kweiyo LLC kwaizoguma. Muzviitiko zvakawanda, kunze kwekunge zvapihwa zvimwe muzvinyorwa zvesangano kana chibvumirano chakanyorwa chakashanda, iyo LLC inomiswa parufu, kubvisa, kusiya basa, kana kubhuroka kwenhengo, nezvimwe zvisaririra.
Ini ndinoda Chibvumirano Chekushanda?
Ehe, iyo yakazara kugadzirwa kweiyo LLC kunosanganisira kunyorwa kweChipangano Chekushanda. Chibvumirano Chekushandisa chinofanirwa kugadzirwa, kungave pamberi kana zvakananga mushure mekunyorwa kweChinyorwa cheSangano. Chibvumirano Chekushandisa chinogona kunge chiri chemuromo kana chakanyorwa.
Ndeapi mapepa basa anodiwa kuti aumbe iyo LLC?
Zvinyorwa zveSangano zvinofanirwa kunyorwa zviri pamutemo uye kumisikidzwa nehofisi yenyika. Mari yekutanga inofanira kubhadharwa panguva ino.
Ndezvipi zvakanakira LLC?
Iko hakuna kuenderera kunovimbika. Kana nhengo ikadzingwa, ikafa, yakaremara kana kusiya basa, iyo LLC inoputswa kunze kwekunge Zvinyorwa zveSangano kana Chibvumirano Chekushandisa zvataura neimwe nzira. Kana iyo LLC ikaumbwa, mamwe matunhu anoda kuti zuva rekuparadzwa kweramangwana reiyo LLC rinyorwe. Kune rimwe divi, mubatanidzwa unoramba uchingovepo sechinhu muchiitiko chekufa, kuremara kana kudzingwa kwemutungamiriri (s) kana maofficial (s). Ikoko kune zvakawanda zvemapepa zvakabatanidzwa mune yakasikwa LLC. Makambani Anopindirwa anozvirumbidza pakuita maitiro aya nekukurumidza uye nekubudirira sezvinobvira. Kana iwe uri kufunga nezve LLC, ndapota nyorera vatinoshamwaridzana navo kuti vataure kuti tingakubatsira sei.
Ndeipi Nyika Ini Yandinofanira Kuumba yangu LLC In
Uyu mubvunzo wakakosha kwazvo uyo unotarisisa kunyatso tarisisa zvinhu zvinoverengeka. Kunyangwe iwe usingasungirwe kupinza mudunhu rekugara kwako, iwe unofanirwa kufunga nezve zvinhu zvakaita sekuongorora mitengo yekubatanidza sekunze mubatanidzwa kana LLC mune imwe nyika, iko iko nzvimbo yezvivakwa zvako, kana zviripo, uye kunyatso tarisa izvo zvakanakira kusanganisa mune imwe nyika isiri yako inogona kupa.
Iyo fizi, mirau nemitemo yekutonga yemakambani zvinosiyana kubva kudunhu kuenda kudunhu, sezvinoita kodzero nemikana inopihwa kunhengo, maneja anotungamira, vatungamiriri, uye mabhodhi. Zvinowanzoreruka uye zvinodhura zvakanyanya kuumba iyo LLC mune yako imba mamiriro kana dunhu rekugara, kunyanya kana yako LLC ichinyanya kuitisa bhizinesi mune imwechete nyika. Kugadzira iyo LLC mune yako imba mamiriro kunoderedza huwandu hwemafirita uye kwete kuisa iyo LLC kunekunze mafirita zvinodiwa uye mubhadharo. Nekudaro, kune zvimwe zvakanaka chaizvo, zvinoenderana nerudzi rwebhizinesi raunofunga kushandisa uye mamiriro emitero iwe aunoda kutora mukana, kana uchibatanidza mune mamwe matunhu akaita seDelaware neNevada.
Paunenge uchiita bhizinesi mune chero nyika isiri iyo iyo iwe kana bhizinesi rako raunosanganisirwa mukati, iwe unenge uchidikanwa kufaira "Kunze Kwekufanirwa" kune iyo chaiyo nyika, iyo ichawedzera mari uye mapepa (semuenzaniso mubatanidzwa wako unoumbwa Delaware asi iwe unoshuvira kuitisa bhizinesi muCalifornia, California inoda mukana wekunze) - kwete chipingamupinyi chikuru, kunyanya kana vhoriyamu yebhizimusi ichida mari yakawedzerwa, asi ichinyatsokodzera kutariswa. Funga zvakare kuti mubatanidzwa wekunze kana LLC, yakambokwanisa kuita bhizinesi mune imwe nyika, inotarisirwa kubhadhara mutero uye mari yegore negore kubva kune iyo nyika yekubatanidzwa uye nyika inokodzera muzviitiko zvakawanda. Mukana wekuumba iyo LLC mudunhu ine yakaderera kwazvo kana isina mutero wemubhadharo wemakambani saka haina kukura sezvazvingaite mune mamwe mamiriro.
Izvo zvataurwa, tinoda iyo Wyoming LLC kupfuura chero imwe nyika. MuWyoming imwe-nhengo nhengo LLC inopa kuchengetedzwa kwemidziyo kubva kumatare edzimhosva kana munhu akamhan'arira nhengo ye LLC. Izvo zvakare haina kudhura pagore pane ayo maviri akasarudzika sarudzo, Delaware neNevada.
Kufunga nezve Kugadzira iyo LLC muDelaware kana Nevada
Nekuti Delaware neNevada zvinowanzozivikanwa senyika dzinoitira bhizinesi uye dzakakodzera mhando zhinji dzemabhizinesi, dzinowanzove matunhu anokwezva "mafambiro ekunze."
Delaware inoonekwa senzvimbo yemubatanidzwa nevazhinji, uye inoonekwa seine yakawanda "yemazuvano" uye inoshanduka mitemo inodzora makambani akaumbwa ipapo, pamwe nekuve ane hushamwari-bhizinesi. Saka nekudaro, maficha emakambani uye e LLC anoonekwa seakakosha, nebasa rakanakisa uye kutendeuka kwakaringana kunopihwa nevashandi vehurumende yemuno - kazhinji zvinokurumidza kupfuura mamwe matunhu. Vanopfuura hafu yemakambani anotengeswa neruzhinji uye anopfuura makumi mashanu nemasere muzana emakambani eFortune 58 anowanikwa muDelaware kune mabhenefiti akapihwa aya makambani makuru, kunyanya ayo "anoenda kuruzhinji," kana kutengesa masheya pamusika wakashama.
Mamwe mabhenefiti anosanganisira:
Yepasi yekutanga kubatanidzwa kana iyo LLC yekudhura mutengo
Hapana mutero wemubhadharo wemakambani unobatanidzwa muDelaware asi usiri kuita bhizinesi mudunhu.
Dare reDelaware Dare reChancery, rakasiyana mutemo wedare redzimhosva, harishandisi majuri, asi rinoshandisa vatongi vakasarudzwa neruzivo rwavo rwemutemo wekambani mukubata nesarudzo dzemutemo dzemakambani.
Munhu mumwe anokwanisa kubata ese emahofisi nzvimbo dzesangano, uye mazita aya haafanire kuverengerwa muzvinyorwa zvekubatanidzwa.
Vashandi, vatungamiri, uye vatariri vekambani havafaniri kuva vagari veDelaware.
Zvikamu zvemasheya ane vanhu vari kunze kweDelaware hazvisi pasi pemitero yeDelaware.
Nevada inozivikanwa nekushayikwa kwayo kwehurumende mutero wemari yemutero uye wega mutero wemari - izvi zvinogona kuve bhenefiti kana mutero chiri chikuru kufunga. Izvo zvinobvumidza kune yakakura chikamu chehunhu kumakambani uye avo vagovana. Saka nekudaro, Nevada inogona kunyanya kufarira makambani ari muCalifornia nedzimwe nyika dzekuMadokero kweUS. Nepo chero mubatanidzwa weveruzhinji uchikwanisa kubatsirwa nemutemo unoshanduka weNevada, Nevada inonyanya kukwezva kumakambani akabatirirwa akazvimirira, sezvo zvirevo zvemitemo zvisipo zvakanangana nekufarira manejimendi. Sezvazviri nekuumba mubatanidzwa muDelaware, vatsoropodzi vekumisikidzwa kwemakambani muNevada vanotenda kuti mitemo nematare ayo ane hushamwari hwakanyanya kumakambani.
Zvakanakira kuumba Nevada Corporation:
Kuchinja-chinja kune Bhodhi revatungamiriri mukugadzirisa zvinhu zvekambani,
Kubvumidza manejimendi kuisa kuchengetedzwa kwakasimba kubva kune vanotora vanotora.
Matare mudunhu iro anotarisa zvakanyanya mukushandiswa kwemutemo wemakambani kupfuura matare edzimwe nyika
Matare eNevada ari kuvandudza rakasimba muviri wenyaya mutemo uyo unoshanda kupa makambani uye kuraira kwavo kuraira pazvinhu zvehutongi hwekambani.
Maumbirwo emitero yeNevada zvakare bhenefiti hombe yekubatanidzwa muNevada. Nevada haina mutero wefranchise. Izvo zvakare haina mutero wemubhadharo wemubatanidzwa kana wega wega mutero wemari.
Kukakavara pamusoro pezvinhu zvemukati memakambani eNevada kunoendeswa muNevada State District Courts, uye kunogona kukwidzwa kuNevada State Supreme Court.
Muna Gumiguru wa1992, mutemo weDelaware wakacherekedza Limited Liability Companies (LLC) - uye kumhanyisa kwakaitika. Seizvo zita rinoreva, kuumba Yakatemerwa Liability Kambani inopa nhengo kushomeka mutoro kuchengetedzwa uye mamwe mutero mabhenefiti, kunyanya mubhizinesi uye nekambani-inoshamwaridza nyika yeDelaware. Uye makambani eFortune 500 anowanzo bvumirana- inopfuura hafu yemakambani Fortune 500 anosarudza kuisa muDelaware. Iyo diki diki yeDelaware iri kukurumidza kuve inozivikanwa sebhizimusi nzvimbo yepakati kusvika kumakambani makuru uye maAdvs anotsvaga nzvimbo ine hushamwari-bhizinesi, nematare uye masisitimu anonzwisisa iyo dzimwe nguva-yakaoma nyika yemakambani. Chikamu chakakura chekukwezva kune ino nyika inyaya yekuti nyika haibhadharise mutero wemubhadharo wemakambani kumakambani asiri kushanda mukati mehurumende, kunyange hazvo makambani ese eDelaware nema LLC anofanirwa kubhadhara mutero wepagore wekambani. Mitemo yaDelaware (kureva iyo Delaware General Corporation Mutemo) yaive yakagadzirirwa kubvumidza kwakanyanya kuchinjika kumakambani emakambani uye mashandiro. Nekuwedzera kuchinjika kweiyo LLC, munhu anogona kutanga kuona kukwezva kwekuumba iyo LLC muDelaware. Kuumba iyo LLC muDelaware kunopawo nhengo kudzivirirwa kubva kuzvikwereti zvebhizinesi nematare edzimhosva, zvingangoita mutero mabhenefiti, zvakavanzika zvakavanzika, uye zvakanyanya kuwedzera bhizinesi kuchinjika Kunyange paine zvinhu zvinoverengeka zvinofanirwa kutarisirwa usati wafunga kuti Delaware ndiyo nyika inokodzera kambani yako, kana izvi zvikonzero zvichishanda kwauri nebhizinesi rako, wobva waumba yako LLC muDelaware inogona kukupa mukana wakakura iwe newe kambani.
Zviitiko zvekufunga nezvazvo
Iyo LLC inopa iyo mabhenefiti uye kuchinjika kweiyo muridzi sekudyidzana, nepo panguva imwecheteyo ichipa yakatemerwa chikwereti uye kuchengetedzwa kwemidziyo yesangano. Pamusoro pekuchengetedzwa kwechikwereti, kune zvimwe zvakakosha mutero zvinofanirwa kutorwa kubva pakuumbwa kweiyo LLC. A Delaware LLC inobvumidza vashoma senhengo imwe kana nhengo zhinji sezvo kambani yako iri kuda kuve nayo, isina paunogumira panhamba, uye hapana parinogumira maererano nemhando dzestoko. Iyo kambani inofanirwa kusarudza maneja ari nhengo uyo anowanzo kuve mukuru musoro wesangano uye anoona nezve manejimendi. Iyo purofiti kana kurasikirwa kwesangano rebhizinesi rinopfuura nekunanga kunhengo yemunhu mari yemutero yekudzoka ("pfuura nemutero"), pasina mutero padanho re LLC. Iyo mambure purofiti yeiyo LLC haifungidzirwe semari inotambirwa neMitezo (kunyangwe ichigona kuve yeManaging Nhengo seyakakosha "fringe kubatsirwa" kurapwa - ona pazasi), uye nekudaro haisi pasi pebasa rekuzvishandira.
Kamwe kana sarudzo yekuumba iyo LLC yaitwa, zvakakosha kuti Chibvumirano Chekushanda chakanyorwa zvakanaka chinyorwe icho chinonyatsoratidza nzira dzekugovera, kodzero uye mabhenefiti enhengo nenhengo iri kutarisira, capitalization, uye chero dzimwe kodzero, mabasa, kupihwa uye mabasa anodiwa kuti mashandiro akanaka eiyo LLC. Chibvumirano Chekushandisa chinogona kufananidzwa nemitemo yekambani, mune yakanyorwa zvakanaka, uye kuomerera pairi, kunobatsira kuona "vheiri rekambani" kuchengetedzwa kweiyo LLC.
Rimwezve rinowanzotaurwa-kubatsirwa kweiyo LLC nderekuti haisi pasi pezvakafanana, zviomarara zvemakambani zvinoitwa neC kana S mubatanidzwa. Zvinogona kuve nyore kumisikidza uye kumhanyisa iyo LLC, chero iyo mhando, yakanyorwa zvakanaka Chibvumirano Chekushandisa chiripo.
Matare Ekuziva Bhizinesi
Chimwe chezvikonzero zvekutanga chekuti Delaware inofungidzirwa senzvimbo yebhizinesi inyaya yekunzwisisa kuti yavo system yedare yakanyanyisa mukunzwisisa uye kurapwa kwemakambani. Iwo matare mudunhu iro anowanzoonekwa seane ruzivo mukushandisa mutemo wemakambani pane iwo mamwe matunhu, kunyanya chibereko chehuwandu hwekambani dzakabatanidzwa ipapo. Nharo pamusoro pezvinhu zvemukati memakambani eDelaware zvinowanzoendeswa kuDare reChancery, inova imwe yematare ekupedzisira akapatsanuka eutendi (zvinopesana ne "mutemo") mune chero nyika yeUS. Kuva dare redzimhosva, hapana majuri, uye nyaya dzayo dzinotongwa nevatongi (kana "maChancellors") eDare. Aya makanzura anowanzoziva "ins uye kunze" kwemakambani akaomesesa mashandisirwo uye kufambiswa uye nekudaro vanopa mutongo wakaomesesa pazvinhu zvinogona kuvhiringidza matare ehurumende. Nekuda kwekuti Dare reChancery risingakwanise kupa kukuvadzwa kwemari, Delaware's Superior Court, dare rekutonga redzimhosva, rinonzwa uye rinotarisa huwandu hukuru hwemhosva pakati pemakambani ane chekuita nemari yemari. Chekupedzisira, nekuda kwenhamba yemakambani anosarudza kuisa muDelaware, iyo Federal Bankruptcy court mudunhu irori inobata nyaya zhinji dzekupokana, uye dare reruwa reUnited States kudunhu reDelaware rinotarisa makakatanwa mazhinji epatent pakati pemakambani eDelaware.
Muma1980, ipapo-Gavhuna weDelaware Pierre Samuel du Pont IV akafudza iyo Financial Center Development Act kuburikidza neDelaware General Assembly. Chiito ichi chakabatsira mukubvisa ingangoita mitemo yese yemubhadharo muDelaware, ichipa mabhanga chikurudziro chekutanga mari yemakadhi echikwereti muDelaware, sezvo mutemo weFederal uchipa kuti mhindu yemari, kana kushaikwa kwayo, inongogumira kune avo vemba yebhangi, zvisinei yekune iro bhangi rinoitisa bhizinesi. Izvi zvakakurudzira kuputika mumakwikwi pakati pemabhangi kuburitsa makadhi echikwereti nemitengo yakasiyana yezvikamu zvakasiyana zvemutengi chikwereti. Uye nekuda kweiyo Delaware's mashoma mutemo wemitero yemitero yakabhadharwa, mabhanga akakwanisa kuburitsa yakakwira-yemubhadharo makadhi kune vane njodzi huru vatengi.
Zvakanakira uye Zvakanakira Kugadzira iyo Delaware LLC
Kudzivirirwa Kwemidziyo kubva kuMutoro. Delaware LLC nhengo dzinonakidzwa neChidimbu Chikwereti, zvinoreva kuti ivo vanochengetedzwa pachezvayo kubva kune chero chisungo cheiyo LLC uye nekutonga kwakabudirira, pamwe nekubva kune iyo LLC pachayo. Vaviri izvo zvine mukurumbira weBusiness Court wekugona uye kurongeka nezviitiko zvavo mumutemo wekambani, uye bhenefiti inova yakajeka.
Bhizinesi uye Corporation masisitimu edare ane ruzivo.
Banking-inoshamwaridza Usury mitemo.
Mutero Makomborero. Delaware inobhadharisa mutero wemubhadharo wemakambani kumakambani asingashande mukati mehurumende, kunyange hazvo makambani ese eDelaware anofanirwa kubhadhara mutero wepagore wefranchise mutero.
A Delaware LLC inobvumidza iyo "yakawanda-tiered" muridzi mune iyo S kana C mubatanidzwa inogona kuve nhengo - izvi zvinogona kubvumidza kwakakura mutero mabhenefiti, uye kuwedzera mutoro kuchengetedzwa.
Delaware inobvumidza "imwechete nhengo" LLCs.
Iyo LLC inobvumidza iyo "yakasarudzika mugove" wemubhadharo – iko kusingaenzaniswi kupatsanurwa kweMitezo purofiti uye kurasikirwa (muzvikamu zvakasiyana kubva kune yavo yega zvikamu zvevaridzi). Izvi zvinoreva kuti Nhengo dzinogona kunakidzwa nezvakanaka zvekugamuchira purofiti (uye kunyora kurasikirwa) pamusoro pehuwandu hwemunhu wega, chero bedzi zvichinyatsojekeswa muchibvumirano chekushanda.
SeNhengo, unogona kupa mari kana zvimwe zvinhu kune iyo LLC, kana kukweretesa iyo LLC mari yekuisa madhora kana kukosha mubhizinesi. Unogona kutora madhora kunze nekutora kudzoserwa kwechikwereti chako (pamwe nemubereko), kugoverwa kwemubhadharo kana mubhadharo wakavimbiswa. Kana chero nhengo dzikafa, iyo LLC inogona kuenderera mberi iripo- zvichitenderana kubvumirana kwakanaka kuvhoti yenhengo dzese dzakasara kana chirevo muchibvumirano chekushanda.
Mutero Makomborero. Delaware inobvumidza kupfuura nepakati pemitero yeVADZ uye kudyidzana, uye haitorere zvemunhu, zvemakambani, zvinyorwa, franchise, chipo, bhizinesi basa kana mutero wekutamisa sitoko. Uye neiyo federal "cheki bhokisi" nzira yemitero, iyo Delaware LLC inogona kusarudza kubvisirwa mutero kuburikidza neyekudyidzana modhi ne "pfuura nepakati" mutero. Izvi zvinogona kuita sekuchengetedza kwakakura kune bhizinesi.
Iyo Delaware LLC ine hupenyu husingagumi uye nhengo iri nyore kuchinjika. Zvinokurudzirwa kupinda muchibvumirano cheNhengo kana mamwe mamiriro ezvinhu achidikanwa.
Delaware LLC Mari uye Mari
Kunze kwe $ 60 yenyika Franchise fizi, zvichibva pane huwandu uye kukosha kwezvikamu, maAdvs uye mazhinji Akabatana Kudyidzana vanobhadhara $ 200.00 gore rega
Kana mutongo ukapihwa uchipesana neiyo LLC pachayo, inogona kubvisiswa, uye chivakwa cheV LLC chakatorwa kana kutengeswa muripo, zvakanyanya nenzira imwechete iyo mubato waizorapwa. Zvakare, kana mutongo ukapihwa wakanangana nenhengo, uye nechibvumirano chakanyorwa chakanyatsoshanda chinodaro, kugovera kazhinji hakugone kumanikidzwa kugutsa chikwereti chekutonga kwenhengo (ndosaka zvichikosha kuve nechibvumirano chakashanda zvakanaka, iwe Kudzivirirwa kwako kuderedzwa). Vanokweretesa kana vatongi vanechikwereti vanofanirwa kuzvigutsa ne "Kubhadharisa Order" iyo inovapa kodzero yekugoverwa kunoitwa neiyo LLC kune imwe nhengo inonzi mukutongwa. Izvi zvinovapa kodzero dzekugoverwa ikoko, asi hazvikanganise kodzero, zvinhu, kana kugoverwa kwemamwe mitezo kana yeiyo LLC seyakazara. Aya marudzi ekudzivirira anoratidzira kukwezva kune maAdvs nevangangoita mari.
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti kuumba yako LLC muDelaware kunogona kupa yakakura bhizimusi mukana kune yako kambani, kunyanya kana iwe uchifunga kushanda kunze kwenyika kana mune mamwe masimba. Vanogona kuisa mari vanokwezva kune chengetedzo uye dziviriro yeaseti inoratidzirwa nehurongwa hwebhizinesi-vanoziva matare nemitemo yakajairika-inoshamwaridzika muDelaware, uye nyika inopa huwandu hwakawanda hwebhenefiti nenzira yekudzivirirwa kubva pachikwereti, kuchengetedzwa kwemidziyo, mutero, uye kushanduka kwebhizinesi. Kupinza kana kuumba yako LLC muDelaware kuchaenda kure nzira mukuita kuti kambani yako iwedzere kuvimbika mubhizinesi uye mukudyara-kutsvaga.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Chivabvu 16, 2019